Huawei c8800 အတွက် မေးမယ်... — MYSTERY ZILLION
Huawei c8800 အတွက် မေးမယ်...
Huawei c8800 နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ <b>Google Map</b> သိရင် Share လုပ်ပေးကြပါ...
<b>Assassin’s Creed 3.4.6 (HD Version).</b>
Install လုပ်ပြီးရင် Internet ချိတ်ပြီး 160.MB ​လောက်တော့ download လုပ်ရတယ်..
you can search and download from mediafire, for your google map 5.9.0 for c8800.
thanksalot for reply kyaw phyo...
but i don't know why my mobile is not work with any ver of google map version.
now.. just using MapDroyd. i got this from MZ forum...
if anyone have working google map version with c8800. pls let me know...
i can't access gmail, facebook via application. i can't download app from app market via phone. Why this is ? Please answer me? Thanksalot.
I would like to know, why ROM is already full with at least 70%. I already install app directly to SD and if app is in ROM, i sent to SD card. But still left in ROM according to space.Please let me know.
Built in SMS and Contact is no good for C8800.
eContacts+ will make your phone more impressive. But will take some more memory.
Application တစ်ချို့က သူတို့ရဲ့ Data တွေကို Phone Memory (ROM) ထဲမှာ သိမ်းထားတတ်တယ်
Menu ->Setting ->Application ->Manage Applications မှာ application တစ်ခုစီကို check လုပ်ပါ
Data ....... ???MB များနေတာတွေ့ရင် Clear data လုပ်လိုက်ရင် ROM free space တိုးလာပါမယ် (application နဲ့ပတ်သက်တာတွေတော့ ပျောက်သွားမယ်နော်.. example.. game save stages.. )
အဆင်ပြေတဲ့ version တွေ့ပြီ... Google Map 4.2.0 (#4210)Web.. သူများဖုန်းတွေတော့ မသိဘူး ကျွန်တော့် c8800 က latest map version တွေအလုပ်မလုပ်ဘူး တရုတ်ဖုန်းဆိုတော့ ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး.. အဆင်ပြေတာကို လိုက်ရှာသုံးနေရတယ် :-D
Locus Pro is my application of choice for maps viewing software. You can use so many maps both online and offline.
I have HUAWEI C8800 800MHz Android Phone. There hasalot of default chinese application. How to uninstall these application. I used SystemAppRemover software. But it can't uninstall. Pls help me .
you should root your phone first, then download "root uninstaller" apk. then you can do what you want.
how to connect internet on PC with C8800
What version can upgrade (2.3.5, 2.3.7), default version is 2.3.3
C8800 ကိုversion မတင်တာကောင်းပါသကော။
Computer နဲ့ချိတ်ရင် c8800 driver တင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် နယူးကွန်နက်ရှင်ပေးလိုက်ပါ။ ဖုံးနံပါတ်က #777 ပါ။ အမည်ကြိုက်တာပေးပါ။ pass ကြိုက်တာပေးပါ။ သုံးပါ။ ဒစ်ကွန်နက် လုပ်ပေးပါ။ မလုပ်ရင် ငွေကုန်ပါမည်။ အကယ်လို့မေ့သွားရင် ကုတ်ရိုက်ပြီးပိတ်လို့ရပါသကော။ ဆိုင်ပို့ရင် ၆၀၀၀-၁၀၀၀၀ ပါနော်။ Root လုပ်ချင်သူများ အတွက် firmware ဆောင်ထားရပါမယ်။ ပြီးမှ root ပါ။ မြန်မာစာထည့်ပါ။ zawgyi ကိုapply မလုပ်ပါနဲ့။ overwrite လုပ်ပါ။ firmware ဂန့်တက်ပါသကော။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ (ပူရှိန်း)
ကျွန်တော့် huawei C8800 က ဖုန်းအ၀င်ရောအထွက်ရော မရတော့ပဲ အပေါ်က လိုင်း signal လည်း cross ပဲ ပြနေပါတော့တယ်။ ပြီးရင် ဖုန်းကို activate လည်းလာလုပ်ခိုင်းနေပြီး activate လုပ်လည်း လုပ်လို့မရပဲဖြစ်နေပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လည်း ဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ ရမလဲ သိတဲ့သူများ ကျေးဇူးပြုပါခင်ဗျာ ။
July 2013 edited July 2013 Registered Users
Huawei C8800 ရဲ့ original firmware 2.3.3 အတွက် Google Apps လေးရရင်ပြောပေးပါနော်... Google Apps for gigerbread က 2.3.5 ထိပဲ support လုပ်လို့ပါ